Plọgị ike na mpụga Typedị C - N'ogbe mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-eji Cdị C mee ihe na mba niile dị na Europe ma e wezụga United Kingdom, Ireland, Saịprọs na Malta. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị C)
Cdị C bụ ma ọ bụ naanị otu ngwa ụwa niile ka eji. Mkpokọ eriri waya a enweghị eriri ma nwee eriri abụọ nwere okirikiri. A maara ya nke ọma dị ka Europlug nke a kọwara na CEE 7/16. Ihe nkwunye ahụ nwere pịpị 4 mm gbara anọ, na-agbanye 19 mm n'ogologo na etiti dị obosara dị 18.6 mm na ntọala ahụ na 17.5 mm dị na isi.
Mkpịsị aka abụọ a nwere akwa aka ogologo 10mm. Ha na-agbakọta ntakịrị oge, mana ha na-agbanwe agbanwe nke na-enye ohere ka plọg na onye ọ bụla na-anabata kọntaktị gbara gburugburu 4.0 - 4.8 mm gburugburu 17.5 - 19 mm. A na - ekechi plọg a maka ojiji na klas II nke chọrọ 2.5 amps ma ọ bụ obere. N'ezie, a naghị achị ya achịcha.
A na-ejikarị ya na mba niile dị na Europe ma e wezụga na United Kingdom, Ireland, Saịprọs na Malta. A na-ejikwa ya n'akụkụ dị iche iche nke mba na-emepe emepe. Ebe ụdị plọp na-ejikarị eme ihe, nke a abụghị ikpe maka ụdị sọks C. Kinddị soket a bụ ụdị nke anya ochie ụdị E, F, J, K or N.
N'ụbọchị ndị a, ọtụtụ mba na-achọ ka ejiri ntọala wụnye ala n'ụlọ ọhụrụ. Ebe ọ bụ na typedị Cdị C adịghị agbada, ha aghọrọ iwu na-akwadoghị ebe niile, a na-edochi ya ụdị E, F, J, K or N (dabere na mba ahụ). Ka ịhapụ inwe obi abụọ: naanị sọks abụrụla nke iwu na-akwadoghị, plọg ahụ ka na-arụ ọrụ. Plugdị ụdị C dabara dabara na a ụdị E, F, J, K or N anya.